साहित्य संस्कृति - Hamro Bulletin
नरेन्द्रको ‘मेरी माया जुन भन्दा उजेली’ गीतले ल्यायो तिजको रौँनक (भिडियोसहित)
गान्धारीको कुरा सुनेर वासुदेव कृष्ण झस्के । गान्धारीबाट त्यस्तो कुरा सुन्नुपर्ला भन्ने सोचेकै थिएनन् । अवस्था नाजुक पाएपछि बचाउ गर्दै भने– ‘माताजी ! तपाईँलाई भ्रम भए जस्तो छ । युद्ध किन भयो तपाईँलाई थाहै छ । युद्ध रोक्न केकति प्रयास गरेँ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । दैवको ईच्छा नै त्यस्तै थियो भने कसको के लाग्दो रहेछ र । रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि युद्ध भएरै छाड्यो । युद्ध मैदानमा उत्रनै परेपछि आफूले सकेको गर्छन्, गरेकै हुन्छन् सबैले । यहाँ भएको पनि त्यस्तै हो । कौरवले सकेका भए पाण्डवहरूलाई सिध्याउँथे । पाण्डवले सके कौरवहरू सिद्धिए । यसमा मेरो कुनै दोष थिएन, छैन । फेरि पनि मलाई नै दोषी देख्नुभएको छ भने त्यो तपाईँको दृष्टि दोष हो । यसबाहेक केही होइन ।’ ‘होइन, होइन वासुदेव ! कुरा त्यसो होइन ।’ कडा प्रतिवाद गर्दै गान्धारीले भनिन्– ‘नानाभाँतीका दाउपेच लगाएर युद्ध गरायौ, लाखौँ मानिसको ज्यान लियौ, लिन लगायौ अहिले आएर उम्कन खोज्दै छौ भने तिमीलाई के भनुँ ? अर्जुनले भनेकै थिए युद्ध गर्दिन, आफन्तलाई मारेर राज गर्नु छैन, योभन्दा त सन्यास लिनु उत्तम हो भन्ने कुरा । तिमी नै होइनौ लम्बेतान गीता प्रवचन सुनाएर युद्ध गर्न लगाउने ? विचरा अर्जुनले पछि छोरा अभिमन्युको मृत्युुका बेलामा पनि युद्ध गर्दिन भनेका थिए । त्यतिबेला पनि तिमीले नै नानाभाँतीका तर्क गरी युद्धमा होमिन बाध्य पारेका थियौ । महारथि कर्णलाई जमिन रथ भासिएर असहाय भएका बेलामा समेत छाडेनौ । अर्जुनले निशस्त्र मानिसमाथि हतियार उठाउनु हुन्न भन्दाभन्दै फलाम तातेको बेला हम्मर न नचलाएर कहाँ हुन्छ भन्यौ, हतियार उठाउन लगायौ । सत्यवादी युधिष्ठिरलाई समेत अर्ध सत्य बोल्न लगाएर गुरु द्रोणाचार्यको हत्या गरायौ । फेरि पनि कुन मुखले मेरो कुनै दोष छैन भन्दै छौ ?’ ‘ओ हो ! माताजी ! तपाईँलाई कसरी सम्झाऊँ ।’ लामो सास फेर्दै वासुदेव कृष्णले भने– ‘हो सत्य त्यही हो तर त्यो मात्र होइन । तपाईँले एउटा पाटो मात्र हेर्नुभयो तर त्यस्तो अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुभएन । त्यस्तो अवस्थामा पु¥याउने कौरवहरू नै हुन् । उनीहरूकै कारण ती सब भएका हुन् । पाण्डवहरू निमित्त मात्र हुन्, जे भएका छन् कौरवहरूकै कारण भएका छन् । उनीहरूलाई लाने, उनीहरूलाई खाने उनीहरूकै कर्म हो । जे रोपेका थिए त्यही पाए, त्यही खाए । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने निमित्तसम्म पनि होइन । मेरा लागि कौरव पाण्डव समान छन्, दुवै आफन्त हुन् । सत्य र धर्मको पुजारी हुँ । जसले सत्य र धर्मको बाटो समाएका हुन्छन् उसैको पक्षमा उभिनु मेरो वाध्यता हो । यहाँ पनि भएको त्यही हो ।’ ‘भो, भो यस्ता आदर्शको कुरा तिमीसितै राख ।’ थप कडा हुँदै गान्धारीले भनिन्– ‘यो पनि तिम्रो बहाना मात्र हो । तिमीले युद्ध रोक्न चाहेकै थिएनौ । तिम्रो चिन्ता युद्ध हुन्छ कि भन्ने भन्दा पनि हुँदैन कि भन्नेमा थियो । के मात्र गरेनौ तिमीले युद्ध गराउका लागि, आफू र आफ्ना पक्षलाई विजय गराउनका निम्ति । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग ग¥यौ, गरेका थियौ । दर्जनौँ झुटको सहारा लिएका छौ । कतै छल गरेका छौ, कतै कपट गरेका छौ । अर्जुनलाई उक्साएका छौ । भीमसेनलार्ई मत्याएका छौ । महारथि भीष्मलाई समेत छाडेनौ । असमयमा माता कुन्तीको कुरा उठाएर कर्णलाई कमजोर बनायौ । दुर्योधनलाई कमजोर पार्न मैमाथि चिटिङ ग¥यौ । होला आफ्नो स्थानमा तिमीलाई पनि सही छु भन्ने लागेको होला तर आफू सही छु भन्नेले अरुलाई पनि आफ्नो कुरा सही लागेको हुन सक्छ भन्ने सोच्नुपर्छ, सोच्न सक्नुपर्छ तर तिमीले त्यता ध्यान दिएनौ । एउटा पक्षको कुरा सुन्यौ, उसैको पक्ष लियौ, समग्र शक्ति त्यसैमा खन्यायौ । विमति जनाउने जति सबैलाई शत्रु देख्यौ, शत्रुवत व्यवहार ग¥यौ, गर्न लगायौ, गर्न वाध्य पा&yen;यौ । तिम्रो उद्देश्य विपक्षमा उभिनेलाई सखाप पर्नु थियो । त्यसैमा खेल्यौ, खेल्न लगायौ, खेल्न बाध्य पा&yen;यौ । वासुदेव ! तिमी अविभावक थियौ, कौरव र पाण्डव दुवै पक्षको । अविभावकले सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ, लान सक्नुपर्छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्झाइ बुझाइ सबैलाई एउटै ढिक्का बनाउनुपर्छ, एकै ठाउँमा उभ्याउनु सक्नुपर्छ । केही अपमानित नै हुनुपरे पनि त्यसलाई समेत सहुनुपर्छ र सकेसम्म उदार हुनुपर्छ, हुन सक्नुपर्छ, हुन सिक्नुपर्छ तर तिमीले त्यतातिर ध्यानै दिएनौ, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्यौ, ‘खाए खा न खाए घिच’ जस्तो ग¥यौ । त्यसैले कुलायनलाई साक्षी राखी श्राप दिँदै छु । जसरी तिमीले मेरो कोख रित्तो बनायौ, आफ्नै अगाडि एकएक गरी छोराहरूको हत्या गरायौ त्यसैगरी तिमीले पनि आफ्नै अगाडि समग्र वंश नाश भएको देख्नुपर्नेछ ।’ यति भनेर उनी अर्कोतर्फ फर्केर रुन थालिन् । वासुदेव कृष्ण ‘जो आज्ञा माताजी ! तपाईँको इच्छा यही हो भने त्यस्तै होला’ भन्दै शिविरतिर लागे । समय बित्दै गयो । सायद वासुदेव कृष्णले गान्धारीको श्रापलाई बिर्सी पनि सकेका थिए होलान् तर भाग्यले भने बिर्सेको थिएन । जतिबेला उनी आफ्नै धाम गोलोक प्रस्थान गर्ने तरखर गर्दै थिए गान्धारीको श्राप लाग्यो । उनकै अगाडि समग्र वंश आपसमा काटाकाट गरी सकिए तर उनले एक शब्दसम्म बोल्न सकेनन् । दाजु बलरामले समेत साथ दिन चाहेनन्, सकेनन्, जो सदा हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर हिँड्थे । उनी पावरमा थिए । चाहेका भए जे पनि गर्न सक्थे, सबैलाई मनाउन सक्थे । नमान्नेलाई सम्झाउन सक्थे तर त्यतातिर ध्यान दिएनन् । उल्टै खेलाइ खेलाइ युद्ध गराए, युद्ध गर्दिन भन्नेलाई पनि बलात् युद्धमा होमिन बाध्य बनाए । अन्ततः त्यसैको फल पाए, फल भोग्न बाध्य भए ।
चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउने भयो सरकारले राहत कार्यक्रम
लयमा फर्किन नपाउँदै नेपाली चलचित्र फेरि अन्योलमा
पर्ख र हेरको अवस्थामा चलचित्रकर्मी
कोरोनाको दोस्रो लहर: बलिउडका दर्जन कलाकार संक्रमित
टंक तिमिल्सिना र पशुपति खनालको ‘ए प्यारु’ दर्शकको माया बटुल्दै (भिडियोसहित)
मिठो स्वरको धनी मेलिना राई र पविन्द्र सुनारको ‘दिन्छौकी मायाले’ रिलिज (भिडियोसहित)
चलचित्रमा लोकगीत : कथाले मागेभन्दा धेरै
निर्माता–निर्देशकले दिएको मेनुका आधारमा संगीतकारले काम गरिरहेका छन्
चलचित्र ए मेरो हजुर ४ को प्रदर्शन मिति भदौ १८
विपी कोइरालाको लोकप्रिय कृति ‘आत्मवृतान्त’ जापानीज भाषामा प्रकाशित हुने भएको छ । विपी विचार राष्ट्रिय समाज, जापानले कोइरालाको कृति आत्मवृतान्तलाई जापानीज भाषामा अनुवाद गरी जापानमा प्रकाशित गर्ने भएको हो ।
नौ स्टाइल नगरकोटीका
हाम्रो बुलेटिनले आख्यानमा फरकपन ल्याउने साहित्यकार नगरकोटीलाई प्रस्तुत गरेको छ । नगरकोटीका यी नौ तस्बिर उनको फरक खालको नौ जीवनशैलीका प्रतीक पनि हुन् ।
कयौँ रात घाटमा बिताएको छुः कुमार नगरकोटी
चर्चित आख्यानकार कुमार नगरकोटीको नयाँ कथा संग्रह ‘कल्पग्रन्थ’ प्रकाशन हुन लागेको खबरसँगै साहित्यक्षेत्रमा यसको प्रशंसा र आलोचना दुवै हुन थालेको छ ।
देउडिया मोबाईलएप मार्फात अनलाईन देउडा प्रतियोगिता हुदै
देउडि़या मोबाईल एप्लिकेसन मार्फत अनलाईन देउडा प्रतियोगिता २०७७ हुनेभएको छ । देउडा प्रतियोगिता देउडिया मोबाईल एप्लिकेसन को आयोजना हुनलमगेको हो । देउडा प्रतियोगिता २०७७ भदौ २५ बाट सुरुभई असोज १५ गते संपन्न हुनेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ३ रचना लाई पुरष्कृत गरिने छ । जस मध्ये प्रथम रचनालाई पुरस्कार स्वरुप रु. ५ हजार, द्वितीय लाई रु. ३ हजार र तृतीय तृतियलाई रु. २ हजार प्रदान गरीने आयोजकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ — टिकटकमा अपलोड हुने छोटो भिडियोमा नौला गीत देखेर, सुनेर युट्युबमा खोज्नेहरू जसरी बढे, त्यसैगरी म्युजिक भिडियो बनाउनेहरू पनि टिकटक सेलेब्रिटी खोज्छन् ।आफ्नो गीतको प्रचार हुने भिडियो पोस्ट गरिदिन आग्रह गर्छन् । कन्सर्ट हुँदैनन्, न सांगीतिक भेला र जमघट हुन्छन् ।गीतहरू म्युजिक भिडियो बनाउँदा कति भ्युज पाइन्छ भन्ने हिसाब पहिल्यै गरेर बनाउने गरेजस्तो देखिएका छन् । अब गीतका लागि म्युजिक भिडियो निर्माणमा चलचित्रजत्तिकै तामझाम हुन थालेको छ ।